धर्म संस्कृती Archives - Page 89 of 104 - Purbeli News
मानव जिवनमा अति अावस्यकीय चिज मध्ये घर प्रमुख हाे । इच्छा र सपना अनुसार अाफु बस्ने घर के कस्ताे बनाउने हाे त्याे कल्पना गरी या चित्रण गरी बनाइन्छ । घर बनाइसकेपछि बिभिन्न सजावटहरू सुरू गरिन्छ तर कतिपय सजावटकै सामानले घरमा असन्तुलनीय बाताबरण शिर्जना हुन्छ । अाउनुस बास्तु शास्त्र अनुसार घरमा के राख्ने र के नराख्ने त्याे बिषयमा केही जान्ने काेशिस गराै ...
थाहा छ, ज्योतिषशास्त्र अनुसार कहिल्यै प्रेम तथा विवाह सफल नहुने यी राशि
एजेन्सी। ज्योतिषशास्त्रको अनुसार प्रत्येक राशिको आफ्नै केही भावनात्मक रोजाई र खुबी हुन्छन् । कुनै–कुनै राशिबिचको सम्वन्ध एकदमै नराम्रो हुने र उनीहरु विचको सम्वन्ध कहिन्यै राम्रो नहुने हुनाले प्रेम र विवाह गर्न नहुने सुझाव दिइन्छ । भने केही राशिहरुमा सम्बन्धमा निक्कै मेलमिलाप पनि हुने हुन्छ । यी राशिहरुबीच प्रेम वा विवाह गर्नु नराम्रो मानिन्छ : म...
मानिस उसको कर्म अर्थात कामका आधारमा बाँचेको हुन्छ । कर्मले नै मानिस सुखी हुने वा दुःखी हुने, सफल हुने कि असफल हुने जस्ता कुराको निर्धारण गर्छ । सबै धर्मले पाप गर्दा नर्कमा जाने उल्लेख छ । गरुण पुराणमा १० काम गर्ने ब्यक्ति अनिवार्यरुपमा नर्क जाने उल्लेख छ । नवजात शिशुको हत्या गर्ने गरुण पुरणामा नवजात शिशुको हत्या गर्ने ब्यक्ति नर्क जाने उल्लेख...
थाहा छ पशुपतिनाथ बारे यी १० रोचक तथ्य ?
पशुपतिनाथको मन्दिर काठमाडौँ जिल्लामा रहेको ऐतिहासिक धार्मिक एवम् पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हो। यो मन्दिर यस संसारमा रहेका २७५ ‘पादल पेत्र स्थलम्’ (शिवको पवित्र स्थान) मध्ये एक मानिदै पनि अाएकाे छ । पशुपतिनाथमा मूख्य रूपमा शिवजीको पूजा हुने गर्दछ। त्यसैले गर्दा नै पशुपतिनाथालाई शैव, शाक्त, वैष्णव, बौद्ध, जौन, गाणपत, नाथ, सिख आदि प्रमु...
यस्ता युवतीसँग संगत गरे खुल्छ पुरुषको भाग्य !
हाम्रो जीवनशैली र आचरणबारे विभिन्न शास्त्रहरूमा अनेक व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । आज हामी समुद्रशास्त्रमा उल्लेख भएका केही कुरा तपाईंलाई बाँड्दैछौं ।उक्त शास्त्रमा कस्ता महिलासँग संगत गर्ने भन्नेबारे व्याख्या गरिएको छ । शास्त्रअनुसार केही खास गुण भएका महिलासँग संगत गरे पुरुषको भाग्य खुल्ने बताइएको छ । अर्थात्, त्यस्ता पुरुष भाग्यमानी हुने बताइए...
मान्छेले परेर मात्र होइन, पढेर पनि जान्दछ भन्ने दृष्टान्त महाभारतमा फेला पर्छ। भीष्मको बारेमा यी आजीवन ब्रह्मचारी हुन् भन्ने स्पष्ट बुझिन्छ। यी किन ब्रह्मचारी हुन पुगे भन्ने विभिन्न ढङ्गबाट कथाहरू रचिएका छन्। त्यो बेग्लै विषय हो। जे होस्, ब्रह्मचारी भनेपछि यिनलाई स्त्री विषयक र अझ सम्भोग विषयक कुरा पक्कै पनि थाहा छैन होला भन्ने अनुमान गर्नु स्वाभाव...
घरमा राख्दा भाग्य भम्किने यी १३ वस्तु
भनिन्छ, कर्मभन्दा ठूलो कुनै धर्म हुँदैन, तर हिन्दु धर्ममा कर्मका साथ–सार्थ धर्मको पनि खास महत्व हुन्छ । त्यस्तै, हिन्दुधर्ममा मांगलिक प्रतीकहरुको आफ्नौ महत्व हुन्छ । यस्ता प्रतिक, वस्तुहरु राख्नाले कुनै पनि काममा अवरोध आउँदैन भन्ने विश्वास गरिन्छ। ओम : सर्वोपरि मंगल प्रतीक – यो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रतिक हो । अ,उ,म तीन शब्दबाट बनेको ओमको अ...
यी हुन् विरलै देखिने यी सपनाका फल
भनिन्छ सपनाको प्रभाव मानिसको जीवनमा पर्ने गर्छ । निन्द्रामा देखिने सपनाहरूले मानिसको भविष्यको संकेत समेत गर्ने गर्छ । ज्योतिषहरू सपनाहरू र सपना देखेको समयलाई विचार गरेर सपनाका फलहरू फरक फरक हुने बताउँछन् । सपनामा देखिने दृश्यहरूले थुप्रै सांकेतिक अर्थ दिन्छ । तपाई हामीले देख्ने केही सपनाहरू यस्ता हुन्छन्, जुन सपना सधै देखिदैन र त्यसले जीवनमा झन्...
सुन्दरताको लागि होस् अथवा शिल स्वभाबका आधारमा होस् पुरुष भन्दा बढी महिलाको बारेमा मुल्यांकन गरिने प्रचलन छ |बिशेष गरि महिलाको स्वभाव र सरलपनले सबैलाई आकर्षित गर्ने गर्दछ |महिलाहरु आफ्नै परिवेश अनुसारको सिको गर्ने पनि गर्दछन तर उनीहरुको स्वभाव जन्मेको महिना अनुसार पनि निर्धारण हुने ज्योतिषीय तथ्य पनि फेला परेको छ |कुन महिना जन्मेका महिलाको स्वभाव कस...
इलामकाे गजुरमुखीमा कात्तिके मेला सुरू
इलाम । जिल्लाको पश्चिमी प्रसिद्ध धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल गजुरमुखीमा परम्परागत रूपमा लाग्दै आएको मेला शनिबारदेखि शुरू भएको छ । हरेक वर्ष कात्तिक शुक्ल पूर्णिमाको दिन लाग्ने गजुरमुखी मेला यस वर्ष पनि शुरू भएको हो । स्थानीय मेला आयोजक समितिको आयोजनामा शुरू भएको मेलामा शनिबार बिहानैदेखि पूजापाठ र दर्शन गर्ने तथा मेला भर्न आउने भक्तजनहरूको भीड लागेको छ...